मनोज गजुरेलले गरे चलचित्रमा डेब्यु, ‘सयकडा दश’ को छायांकन सुरु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मनोज गजुरेलले गरे चलचित्रमा डेब्यु, ‘सयकडा दश’ को छायांकन सुरु
काठमाडौँ । हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलको चिनारीमा अर्को प्वाँख थपिएको छ । उनको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘सयकडा दश’ छायांकन सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
बौद्ध नयाँबस्तीस्थित सर्वेश्वर महादेव मन्दिरमा पहिलो दिनको दृश्यांश खिचियो । अभिनेता राजाराम पौडेलले माला लगाएर गजुरेललाई फिल्म क्षेत्रमा स्वागत गरे।
‘डेब्युका लागि उपयुक्त फिल्मको पर्खाइमा थिएँ’ गजुरेलले भने, ‘म कमेडी विधाकै भएपनि मेरो विचारमा फिल्मको भूमिका सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुनुपर्छ भन्ने हो । सयकडा दश यी दुईको उपयुक्त मिश्रण हो मेरा लागि।’
अभिनेता पौडेलले गजुरेललाई घरेलु फिल्मले ‘महान’ अभिनेताको रुपमा पाउने बताउँदै उनको ट्यालेन्टको प्रशंसा गरे । फिल्मभित्र यी दुईजना सम्धीको भूमिकामा प्रस्तुत हुँदैछन्।
ठेगाना र प्रेमगीत २ फेम्ड निर्देशक रामशरण पाठकले यसपटक सोसल एवं कमेडी ड्रामा निर्देशन गर्दैछन्। ‘यसपटक समाजसँग सीधै कथावस्तु जोडिएको छ । ‘सदाचारको वकालत फिल्मले गर्नेछ’ उनले भने, ‘हामीले यसभित्र प्रेम र भ्रष्टाचारको प्रभाव र अन्तर्सम्बद्ध देखाउन लागेका छौं।’
भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रेम फिल्मको बटमलाइन राखिएको छ । सायद २ अभिनेता अमृत ढुंगाना, डेब्यु गर्ल करुणा श्रेष्ठले अनस्क्रिन रोमान्स गर्दैछन् । रवि डंगोल, रस्मी भट्ट, उत्सव न्यौपाने, अमित पोखरेल, सोनिया राई, कुमार कार्की, प्रसिद्ध थापा र मानस्वी निरौला लगायत छन्।
रामेश्वर कार्कीको छायांकन, बनिश शाहको सम्पादन, दिलिप ओखेडाको नृत्य निर्देशन, कल्याण सिंहको संगीत छ । युट्युव स्टार गायक स्वप्न सुमनले पाश्र्वगायनमा त्रिशाला गुरुङ र संदेश पाठकसँग टीमअप गर्दैछन्।
दर्शन नेपाल क्रिएसन प्रालिको ब्यानरमा बन्न लागेको फिल्मलाई रज्जु प्रधान र उत्तम खत्रीले निर्माण गर्न लागेका हुन् । काठमाडौं र पोखरामा सुट गरिने फिल्मको सेड्युल झन्डै एक महिनाको हुने जानकारी निर्देशक पाठकले दिए।